Imithetho emihlanu yobudlelwane engafanele iphulwe
Kwiimeko ezinzima, abantu basebenzisa ukubhekisela kwimigaqo kwaye bawalandela ngokuthe ngqo. Kwaye xa kuziwa kubudlelwane nobomi bomntu, kuvela ukuba akukho miyalelo. Kukho iincwadi ezinxulumene nolwalamano lomfazi kunye nendoda, kodwa zibalwe ngekhulu lokugqibela. Yimiphi imithetho kunye nokuthintela kubakho kulwalamano? Akukho zikhundla eziqinileyo, kodwa ezi ngcebiso ziya kukunceda uhambe ngendlela engaziwayo, ebizwa ngokuba nobuhlobo.
Ubudlelwane phakathi kwabasetyhini namadoda
Umgaqo wokuqala. Mamela intliziyo
Ukuza kumhla wangempela, ukudlala ngothando nomntu oyithandayo okanye uthetha nomntu kwi-intanethi, kufuneka uphulaphule intliziyo yakho kwaye uqaphele iimvakalelo zakho zangaphakathi. Ukuba amagama okanye izenzo zomntu ozithandayo ziyabangela ukuba uzivelele, kufuneka uqaphele kwaye usebenze ngale ndlela. Iimvakalelo zimbi kwaye zilungile. Umzekelo, ukuba uthe wadibana kwi-intanethi kwaye kubonakala kukuthakazelisa kuwe, kwaye uthe waxoxa ngefowuni, kwavela ukuba le nto ayikho into ofuna ngayo, unokwenza izigqibo wena kwaye ungahlangabezane nabo ebomini boqobo. Umzekelo omhle unokuba ukuba ngomhla obonakala ngathi unamahloni, ukhathazekile, kodwa ngeenjongo ezilungileyo, intliziyo iya kukuxelela ukuba kufuneka unike ithuba elilodwa. Ekugqibeleni, ngomhla wesibili, uya kuqonda ukuba ufuna ukumbona kwakhona nokuba yintoni lo mntu ngokwenene.
Umgaqo wesibini. Zama ukungahoyiki "iimpawu ze-alamu"
Kwintetho nomntu esiyithandayo, sibona kwaye siva izinto esizithandayo. Ngokomzekelo, kwingxoxo umntu uthetha ngolwalamano oludlulileyo, unqwenela kakhulu ukuthetha ngabo. Umphefumlo, uyaqhubeka ebudlelwaneni. Oku kufanele kube "isalathisi se-alamu" kwaye kufuneka kukuvuyise. Nangona ukuba uyindoda elungileyo, ubona amacala akhe amnandi kuphela kuye, kodwa akakakulungeleli olu dlelwane. Ngokuqhelekileyo sithintela nje iimpawu zomshuwalense kwaye sifaka ulwalamano nomlingane ongafanelanga. Impumelelo yobudlelwane bakho iya kuxhomekeka kwindlela obenayo ngayo lobu buchule kunye nokuba unako ukuphawula le miqondiso. Kuphawula, kwaye ungazami ukufumana iphutha lakho iqabane.
Umthetho wesithathu. Izenzo ezithetha ngokugqithiseleyo kunamazwi
Ngenye imini uya kudibana nendoda enegama lakhe eliza kunqoba kwaye likhulu, kodwa izenzo zakhe aziyi kuzuza ipenny. Ngamehlo akho uza kujonga njengeqhawe, i-knight, i-winner. Kodwa ngokukhawuleza xa ufuna ukwenza ezinye izenzo, izenzo, uphelelwa yinyaniso yokuba abakho. Ukufezekisa impumelelo ebuhlotsheni bakho kunye nesoka lakho, kufuneka uhlalutye izenzo zakho, kuba bathetha kakhulu ngaphezu kwamagama.
Umgaqo wesine. Akukho mdlalo
Into ephambili kukuba ngumntu onyanisekileyo onokufuna ukwakha ubudlelwane naye. Ufanele uhloniphe isiqingatha sakho njengeqabane elifanelekileyo, yenza oko uthembisa. Ukuba uthembisa ukuza, woza, ukuba uthembisa ukubiza, fowuna. Ukuba umntu uyabuza, mxelele inyaniso. Imidlalo ayifanelekanga kulwalamano. Ukuba iimvakalelo zeqabane lipholile phantsi, mxelele oku ngaphandle kokuphikisana nokuthetha ngokucokisekileyo, ungathuli ukuba ufuna ukuba lo mntu abone kwakhona. Ukuba ngaba malunga nobudlelwane, musa ukudlala ngeemvakalelo zakho.
Umthetho wesihlanu. Gwema "abadlali"
Abantu abangaqhelekanga "abangekhoyo" abavunyelwanga ubudlelwane, aba bantu babizwa ngokuba "ngabadlali". Ngendlela yakho, obo bantu banokuhlangana. Abanomdla kulwalamano, bafuna iinzuzo. Omnye ufuna i-support support, umntu ukhangele ubuhlobo ebusuku. Kodwa naziphi na iinjongo abazenzayo, awunayo indlela efanayo nabo. Ngeke ube nantoni enhle kubo, nje ulahlekelwe amandla kunye nexesha. Ke kaloku, xa befumene zabo, baya kutshabalala ebomini bakho.
Apho unokuhlangana khona ubuhlobo obunzulu
Isicelo sokuncediswa, iingcebiso zeengqondo zengqondo
Kuthekani ukuba akukho nto iqondayo ngokuvisisana nolwalamane wakho?
Ungaziqonda njani ukuba ibhinqa ifanelekileyo kumfazi
Ungakuphelisa njani umona?
Ungaphila ukuhlukana kwesikhashana?
Izibophelelo ezingezobungozi: iifashini ezinqabileyo zonyaka ka-2015
I-Lipstick: ingozi kwaye inenzuzo
Ukuphuhliswa kokuqala kunye nokukhuliswa komntwana
Isibhengezo sokuqesha - sifunda phakathi kwemigca
ULudmila Artemieva: "Ndiyothuka ngaphandle kokuzichaza"
IHoroscope ye-2011 esikali
Indlela yokwenza iinwele zikhuni ekhaya
Umoya wasekhaya: ingaphakathi kwindlela yesimanje
I-Apple jam ebusika
Umphathi wefestile 2010
Akunjalo kwaye banoyingozi, le mkhuba emibi
Iindlela zokuqinisa izipikili ekhaya
Ziyintoni, iimpawu zetyhefu?
Yintoni eya kwenzeka kwi-ruble ngo-2016?